Baltimore Orioles│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Affectionately known by their fans as the O’s and the Birds, the Baltimore Orioles areamajor league baseball team rooted in Baltimore, မေရီလန်းပြည်နယ်. They are owned by Peter Angelos, an attorney. They play in the American League’s Eastern Division. The Orioles’ history dates back to the year 1893 and the town of Milwaukee, Wisconsin, when the team began in the minor Western League. That minor league would become the major American League in the early 20th century, and the original Baltimore Orioles, who were in the National League, relocated around this time to New York, where they became the New York Yankees. Afterastint as the St. Louis Browns, the team would be moved again to Baltimore and become the present day Orioles in the early 1950s. One popular tradition at Orioles games that dates back to the 1970s is the accenting of the letter ‘O’ when singing the line ‘Oh, say does that” from the Star Spangled Banner. The ‘oh’ is accented by yelling out ‘O!’ The pronunciation of this vowel also distinguishes the Baltimorean accent. Some argue that the shrieking of the ‘O’ is disrespectful. But Baltimoreans argue that, since Francis Scott Key wrote the Anthem in their harbor during the 1812 War, then they havearight to sing it however they want. The tradition is also carried out at other sporting events throughout the region, particularly at home games of the Maryland Terrapins and the Baltimore Ravens. It is even yelled at home games of the Washington Redskins. Some schools in the region have tried to ban the chanting when the Anthem is being sung, but to little effect. This ‘O’ chanting causedastorm of controversy in 2005 when some fans started chanting at RFK Stadium during Washington Nationals games. A lot of people felt that the chant was not appropriate at RFK. နေတုန်းပဲ,alot of Washingtonians are also fans of the Orioles. နောက်ဆုံးတော့, the Orioles were the closest team after the Senators were relocated. နေတုန်းပဲ, by the time summer rolled around, the ‘O’ chant was next to nonexistent. Baltimore Orioles
ကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းများတွင် Pratise ဂေါက်သီး
ကိုယ်ခံပညာ: ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းပညာများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း, အပိုင်း 1
ထိပ်ဆုံး5Fly ငါးဖမ်းအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်
ကျောက်တောင်တက်ခြင်း ‘ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်အကြံဥာဏ်များ
Fitness Ball ကို အသုံးပြု၍ ဂေါက်သီးအတွက်သင့် Core ကိုခိုင်ခံ့စေပါ?
Humminbird Fishfinder 585 – သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းများစက်ဝိုင်းထဲမှာ Pro ကို Be
ပထမဆုံးစက်ဘီးဘီးသည်မြင်းဆွဲလှည်းမှဖြစ်သည်, စက်ဘီးအနားကွပ်ပတ်လည်တွင်သတ္တုကြိုးဖြင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်, စီးရန်အလွန်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အလွန်မသက်မသာ. ထိုအခါ Dunlop လို့ခေါ်တဲ့လူတ (စကော့တလန်) pneumatic ယာကိုတီထွင်ခဲ့တယ်, Macadam နှင့်အတူဤ (နောက်ထပ်စကော့) ကတ္တရာလမ်းမျက်နှာပြင်ကိုတီထွင်ရာတွင်စက်ဘီးစီးခြင်းကို ပို၍ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်. စက်ဘီးအနားကွပ်, စက်ဘီးဘောင်ဒီဇိုင်းအများကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်မထားဘူးလိုပဲ, ၎င်း၏နေဆဲလှည့်လည်ခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်. ပထမသစ်သားအနားကွပ်များမှနောက်တစ်ခုကိုသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်, then alloy and now if you can afford it, carbon. Of all bicycle parts the bicycle rim can makeabig difference to how your bike handles. First the weight of your rim affects your sprinting and climbing as the weight will low you down, foralong, flat effort the weight isn’t so important as when you get the wheels rolling the weight can help to keep them going. The shape of the rim can be important also,aflat rim is best for climbing as aerodynamics are not so important onahill,adeep section, aero, rim will help you cut through the air, but inacross wind could cause you handling problems. Bicycle Rims Materials The different materials used for rims are very important also, steel is heavy and if damaged can be difficult to pull back into shape, but because its so strong it is quite difficult to bend in the first place and steel is cheaper than all the other materials. Alloy is probably the most popular rim, it can be made in any shape and profile, flat or aero, but not too deep as it would then weigh too much, most deep section rims are ofaalloy braking section nearest the tire which is then mounted toacarbon deep section for lightness and aerodynamics andavery beautiful looking bicycle rim. As with most things if money is no problem you can go for the best, this would be an all carbon rim, strong and very light, but there areafew problems with these rims, first they don’t brake so well in wet conditions and you must use special brake blocks for carbon and they can be expensive, also the rim has to be perfectly round and not have any bulges in the rim wall as this will make braking quite erratic, carbon isadifficult material to work with and must be well looked after. Types Of Rim To Consider There are also two types of rim to consider and this depends on which kind of tire you want to use, first there are tubular tires these are glued on to the bicycle rim, cost more and are difficult to repair afterapuncture, but for racing they feel and ride wonderfully. Clincher tires have improvedalot recently and are nearly as good as tubulars for performance and are easily repairable and more reasonably priced. Most manufacturers make all styles in both systems. So which should I buy? Not an easy answer, as there is so much to choose from, years ago you went to your local bike shop, picked out which hubs, spokes and rims you wanted and he would build your wheels, but now most rim makers also manufacture there own wheel sets, Mavic, Shimano and Campagnolo are probably the best known, check out there web-sites for all there new goodies, there are other brands and if you go to your local cycle shop or look in the bike magazines you’ll find them. There isalot to choose form, but they are all round. စက်ဘီးဘီးများနှင့်ဘီး, မင်းရဲ့စက်ဘီးကသူတို့မရှိရင်ဘယ်နေရာကိုသွားသွား
ဒါဟာမည်သည့်ပါဝါလေ့ကျင့်ခန်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အပေါ်ကြီးမားတဲ့သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုသက်သေပြအချက်ဖြစ်ပါသည်’ ယေဘုယျအားဖြင့်ဂေါက်သီးလွှဲနှင့်ဂေါက်သီးဂိမ်း. တကယ်တော့အားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတိုင်းဟာဂေါက်သီးကစားနည်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမှာပါ. သို့သော်ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းစွမ်းရည်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်သင်၏ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကို ပို၍ ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်. ဂေါက်သီးကစားခြင်းတွင်သင်အသုံးပြုသောကြွက်သားများအပေါ် မူတည်၍ အားနည်းနေပြီး ပို၍ အာရုံစူးစိုက်နိုင်သည်. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအတွက်အဓိကတိုးတက်မှုဖြစ်စေရန်အထူးဂရုပြုထားသောဂေါက်သီးစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာသည်အိမ်တွင်သက်သောင့်သက်သာရှိနိုင်သည်, ရုံးသို့မဟုတ်ပင်ခရီးသွားလာနေစဉ်, တစ်နေရာရာမှာတချို့ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာဖြစ်နိုင်သည်. ပိုကောင်းတဲ့ဂိမ်းကစားဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအားဖြည့်ပေးပေမယ့်လည်းနာကျင်မှုကိုဖယ်ရှားပေးခြင်းအားဖြင့်ဂေါက်သီးလွှဲခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းသည်ဂိမ်း၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပိုမိုကြီးမားစွာတိုးတက်စေနိုင်သည်. ဥပမာအားဖြင့်အောက်ပါအစွမ်းထက်, သို့သော်ရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဂေါက်သီးသမားများစွာအားခံနိုင်ရည်ရှိစွာတစ်နေ့လုံးဂေါက်သီးကစားရန်ခံနိုင်ရည်ပိုမိုရရှိစေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသောပုံမှန်ကျသည့်ပြbackနာများကိုဖယ်ရှားပစ်ခဲ့သည်။. ဂေါက်သီးလွှဲ၌ဤပါဝါလေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်၏အစွမ်းခွန်အားကိုလွန်စွာကြီးမားစွာခြားနားစေပြီးသင်ကိုယ်တိုင်၏သက်ရောက်မှုကိုယုံကြည်ပြီးတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်. ဂေါက်သီးလွှဲခြင်း၌ပြုလုပ်သောဤလေ့ကျင့်ခန်းကိုသင်၏အစာအိမ်ပေါ်တွင်မြေပြင်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းခြင်းဖြင့်သင်၏လက်များကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထားခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်. ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ရင်ဘတ်နှင့်အထက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာမကလက်များနှင့်ခြေထောက်များကိုတတ်နိုင်သလောက်မြှင့်သည်. သင်၏အစာအိမ်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး၏အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန်သင်ထိုသို့ပြုလုပ်သည်. အနေအထားကိုင်ထားနှင့်တစ် ဦး အရေအတွက်အဘို့အသွားပါ 10. အဘို့ဤရိုးရှင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာ2နေ့စဉ်စုံလင်ခြင်းကသင့်အတွက်အနိမ့်ကျသောနာကျင်မှုကိုလုံးဝဖယ်ရှားပေးသည်. ဒါကြောင့်ဂေါက်သီးကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ခဲ့လျှင်ဖြစ်ပါတယ်. ဂေါက်သီးလွှဲတွင်အခြားစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ခန်းများစွာရှိပြီးမည်သည့်ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုမဆိုကြီးမားသောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်. အဆိုပါဂေါက်သီးလွှဲအတွက်ပါဝါလေ့ကျင့်ခန်း
တက္ကဆက်ပြည်နယ်အတွက်,2လိုင်စင်လိုအပ်သည်. ပထမတစ်ခုမှာထိန်းသိမ်းရေးလိုင်စင်ဖြစ်သည်. ၎င်းသည်လူတစ် ဦး အားငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ရယူရန်မလိုအပ်မီလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးလိုင်စင်ကိုငါးမှရရှိနိုင်သည်, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် & ပန်းခြံများသို့မဟုတ် FWP. ၎င်းသည်လူတစ် ဦး ၏လူမှုဖူလုံရေးနံပါတ်နှင့်တောင်းဆိုထားသောအခြားအချက်အလက်များကိုပေးခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်. တရားဝင်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံနှင့်အတူမှန်ကန်သောအိုင်ဒီများကိုလိုင်စင်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်တင်ပြရမည်. ပြီးပြီဆိုတာနဲ့, ငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ကိုမရရှိနိုင်ပါ၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်းလည်းမရှိ၊ တစ်နှစ်သာသက်တမ်းရှိသည်. ပုံမှန်အားဖြင့်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်ဖမ်းမိသောငါးများသည်အတက်အကျများဖြစ်သည်, ရောက်ရေချိုငါးနှင့် sheepshead. တက္ကဆက်တွင်ငါးဖမ်းလိုသူမည်သူမဆိုအားကူညီနိုင်မည့်အချက်အချို့ကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်; 1. ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကမှန်ကန်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေရဖို့ပါ: လှေကောင်းတစ်စင်း, တံငါသည်, reels နှင့်ငါးစာ. 2. တ ဦး တည်းအရပျနှငျ့အကျွမ်းတဝင်မဟုတ်ပါဘူးလျှင်, အကောင်းဆုံးငါးဖမ်းသည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာမှစတင်သည်ကိုဒေသခံများအားမေးမြန်းခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. 3. ချိတ်အမျိုးမျိုးအရွယ်အစားရှိနိုင်ပါသည်. ငါးမျှားရန်အတွက်မှန်ကန်သောချိတ်သည်အသုံးပြုမည့်ငါးစာအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်. 4. အထူးသဖြင့်ချိတ်၌ဖမ်းမိသောငါးများကိုထုတ်ယူသောအခါဒဏ်ရာကိုကာကွယ်ရန်, စိုစွတ်သောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ရန်အကြံပြုလိုသည်. 5. Seagull များအတွက်ငါးသည်အဓိကဖြစ်သည်. အကယ်၍ oneရိယာတစ်ခုတွင်သိုးအုပ်ရှိလျှင်ထိုနေရာသည်ငါးဖမ်းရန်ကောင်းသည်ကိုဆိုလိုသည်. တ ဦး တည်းတိတ်တဆိတ်ချဉ်းကပ်ငါးစာတင်ထားရုံငါးဝင်လာစတင်စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်. 6. အချို့သောငါးများသည်ရေရှင်းသောအခါလမ်းလွဲသွားသော်လည်းငါးများသည်ငါးစာကိုလည်းတွေ့နိုင်သောကြောင့်အတော်လေးခက်ခဲသည်. ငါးများထပ်ဖမ်းရန်, ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာနက်ရှိုင်းသောရေ၌ဖြစ်သည်. 7. ငါးမျှားသည့်အခါငါးစာအမျိုးမျိုးကိုစမ်းရန်အကြံပြုလိုသည်. အချို့သောငါးများကိုတစ်မျိုးတည်းဖြင့်အလွယ်တကူဖမ်းမိပြီးအခြားသူများကမူမရပေ. ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာရရှိနိုင်စေရန်နှင့်ငါးထွက်လာရန်အတွက်သည်းခံရန်လေ့ကျင့်သည်. Texas တွင်ငါးဖမ်းခြင်း
ဤရွေ့ကားကိုးကားကစားသမားသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ဖြစ်ကြသည်. ဒီကြယ်တွေဘာပြောခဲ့သလဲဆိုတာကြည့်ပါ ဦး. ငါသည်ဤပစ္စည်းပစ္စယစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှာပါ. Christy Mathewson victory အောင်ပွဲကနေသင်ခန်းစာအနည်းငယ်သာသင်ယူနိုင်ပါတယ်. ရှုံးနိမ့်မှုမှသင်သင်ယူနိုင်သည်။’ base များစွာသောဘေ့စ်ဘောပရိသတ်များသည်အားကစားသမားတစ် ဦး အားဘေ့စ်ဘော၏ဇိမ်ခံမှုအတွက်လိုအပ်သောမကောင်းသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်, တစ် ဦး မော်တော်ယာဉ်အောက်ပါအတိုင်းသောအနံ့ကဲ့သို့။’ Mickey Mantle ‘ကျွန်ုပ်သည်ဤတာရှည်အသက်တာကိုသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်သိပါက, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုကောင်းတဲ့စောင့်ရှောက်မှုယူကြပြီချင်ပါတယ်။’ home တစ်စုံတစ်ယောက်ကကျွန်ုပ်သည်အိမ်သို့ပြေးရန်ပန်းကန်တက်ပြီးကျွန်ုပ်သွားခဲ့ဖူးပါသလားဟုကျွန်ုပ်အားတစ်ချိန်ကလူတစ်ယောက်ကမေးခဲ့သည်. ငါက, ‘သေချာပါတယ်, အချိန်တိုင်း။” 'ငါသိထားသလောက်, အာရုန်သည်ငါ့ခေတ်၏အကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားဖြစ်သည်. သူသည်လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းဂျိုးဒီမဂ်ဂျီယိုသူ့ရှေ့တွင်ရှိခဲ့သောဘေ့စ်ဘောဖြစ်သည်. သူဟာကြောင့်ရဲ့အကြွေးကိုလက်ခံရရှိဘယ်တော့မှရဲ့။’ Joe DiMaggio me ကျွန်ုပ်ကိုရန်ကီးတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။’ 'ငါရည်မှန်းချက်တစ်ခုနှင့်အတူရုံ ballplayer ပေါ့, ဒါကငါ့ဘောလုံးကလပ်ကိုအနိုင်ယူဖို့ငါရသမျှအားလုံးကိုပေးဖို့ပဲ. ငါအခြားမည်သည့်လမ်းကစားဘယ်တော့မှပါတယ်။’ me ကျွန်ုပ်ကိုပထမ ဦး ဆုံးသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးအကြိမ်တွေ့မြင်နိုင်သောကလေးအချို့အမြဲရှိသည်, ငါသူ့ကိုအကောင်းဆုံးပေးဆပ်’ '' Babe Ruth 'ပြဇာတ်ကိုကြည့်ရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာ မှလွဲ၍ အရာရာတိုင်းကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။’ Ted Williams ‘သင်သိပ်မကောင်းဘူးလို့မထင်ဘူးဆိုရင်, အလွန်အမင်းမစဉ်းစားပါ’ 'hitter ဖြစ်လာရန်တစ်လမ်းတည်းသာရှိသည်. ပန်းကန်ကိုတက်ပြီးအရူးလုပ်ပါ. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒေါသထွက်ပြီးအိုးကိုစိတ်ဆိုးပါ။’ I ကျွန်ုပ်သည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာသုံးသောင်းပေးဆောင်နေပါက, ငါလုပ်နိုင်အနည်းဆုံး .400 hit ခဲ့သည်။’ M DiMaggio ဟာတကယ့်ကိုလှည့်ပတ်ကစားနိုင်သူပါ. သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများကိုနံပါတ်များနှင့်ဆုများဖြင့်အကျဉ်းချုံး။ မရပါ. အသံကျယ်နေလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကတိုင်းပြည်အပေါ်လေးနက်တည်မြဲသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။’ itter တကယ်လို့များအမုန်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်မွေးဖွားလာခဲ့ရင်ငါပဲ။’ ဤဆောင်းပါးသည်သင်ဖတ်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်မည်ဟုသင်ထင်သူမည်သူ့ကိုမဆိုအခမဲ့ပေးပို့နိုင်သည်. ဘေ့စ်ဘောဂရိတ်အားဖြင့်နောက်ထပ်ဂရိတ်ကိုးကား
ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်မက်ရှိသည်, အလိုဆန္ဒများ, ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ၊ ၎င်းခေါင်းစဉ်ခါးပတ်ကိုလေထဲတွင်မြင့်မားစွာကိုင်ထားခြင်းကသင့်အားရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေသောလူအုပ်၏စွမ်းအင်ကိုခံစားခြင်းနှင့်တူပါလိမ့်မည်ကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။. နောက်ကျောအဖြစ်မှန်မှဤအရပ်၌သင်တို့အဘို့မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ. ထိုအိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာရန်သင်တစ်ရက်ထဲသို့အချိန်မည်မျှပေးသနည်း? သင်၏ရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်အိပ်မက်ကိုပိုမိုနီးကပ်စေရန်သင်လေ့ကျင့်ခန်းသို့မဟုတ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအရာတစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်သည့်အချိန်, မင်းရဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာတီဗွီကြည့်နေတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်တယ်. သငျသညျဖန်တီးမှုမြင်ယောင်ဖို့ဘယ်လိုသိလျှင်စိတ်ကူးယဉ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်ငါ့ကိုမှားယွင်းတဲ့မရကြဘူး. သင်၏အလေ့အထများသည်သင်၏အနာဂတ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်ကိုသဘောပေါက်ပါ. အောင်မြင်သောလူများတွင်အောင်မြင်သောအကျင့်များရှိသည်, မအောင်မြင်လူတွေမကျင့်. သင်၏အိပ်မက်အကောင်အထည်ပေါ်လာစေရန်သင်၏အချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်သောနေရာများသို့ဖွဲ့စည်းရန်အစီအစဉ်တစ်ခုလိုအပ်သည်. အောင်မြင်တဲ့လူတွေအားလုံးမှာအစီအစဉ်ရှိတယ်, နောက်လိုက်ပါ, နှင့်သူတို့၏တိုးတက်မှုကိုတိုင်းတာ. သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချရန်သင်၏အချိန်အများစုကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လုပ်ဆောင်ပါ, i.e. လေ့ကျင့်ရေးနှင့်အေးစက်, သင်ပိုကောင်းတဲ့တိုက်လေယာဉ်တစ်လုံးဖြစ်လာဖို့ကူညီမယ့်အကြောင်းအရာကိုဖတ်ပါ၊ ကြည့်ပါ - ဥပမာ - သင်၏တိုက်ပွဲများ၏ဗီဒီယိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များသည်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကြည့်ရှုရန်။. သင်၏အကြောင်းရင်းကိုသင်၏နေရာတွင်ထည့်ထားခြင်းအားလုံးအကုန်လုံးသင့်ရဲ့အာရုံစိုက်မှုနှင့်စွမ်းအင် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသင် MMA လောကမှာဒါမှမဟုတ်ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုမှာအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ရန်ပွဲအစီအစဉ်နဲ့အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကို ဦး တည်သင့်သည်။. အလုပ်များနေတဲ့နေ့ကနေအိမ်ပြန်လာမယ့်အစား, ဘီယာနှင့်အတူနောက်ကျောကန်နှင့်ဂိမ်းစောင့်ကြည့်, နည်းစနစ်အသစ်များကိုသင်ယူရန်သို့မဟုတ်သင်၏အမြန်နှုန်း (သို့) ပါဝါကိုတိုးတက်အောင်ကူညီရန်ညွှန်ကြားချက် DVD ကိုတင်ပါ. ဘယ်ဘက်အလေးရှိအားကစားရုံသို့သွားပါ, cardio လုပ်ပါ, ခွန်အားရထားသို့မဟုတ်သင်၏ sparring မိတ်ဖက်နှင့်အတူနည်းစနစ်အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါ. အလုပ်ခွင်တွင်သို့မဟုတ်အိမ်ပြန်စဉ်အိမ်၌သင်မကြာသေးမီကသင်လေ့လာခဲ့သောနည်းစနစ်ကိုလုပ်ဆောင်သောပွဲတွင်မိမိကိုယ်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ subconscious အတွက်အမြစ်တွယ်ဖြစ်လာသည်နှင့်သင်၏လက်နက်တိုက်၌တည်ရှိ၏. သင်၏အားသာချက်များကိုတည်ဆောက်ပါ, မင်းရဲ့အားနည်းချက်အပေါ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး. လူသုံးမျိုးရှိတယ်, အမှုအရာဖြစ်ပျက်စေသူတွေကို, အရာတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေဟာဖြစ်ပျက်တာကိုပြောတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်. မင်းဘယ်သူလဲ? ဒါကြောင့်မင်းတိုက်ပွဲအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်အပျက်ကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်တာလဲလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆက်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားစွာစာရင်းယူပါ။. သငျသညျအစဉ်အမြဲပြုမိသောအရာကိုလုပ်နေတာအပေါ်ဆက်လက်လျှင်သင်အစဉ်အမြဲရရှိသောအရာကိုဆက်လက်စောင့်ရှောက်လိမ့်မယ်. မင်းရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကံကောင်းတာမဟုတ်ဘူး, ဒါမှမဟုတ် “ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပါကဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်”. ဒါဟာအာရုံစိုက် - အာရုံစိုက်မဟုတ်ပါဘူး; သင်သည်သင်၏အာရုံထားခဲ့ကြသည်အားလုံးအကြောင်းပါပဲ. သင်၏အကျင့်များသည်အနာဂတ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်
Iron Palm Q မှဆက်လက်&Sigung ရစ်ချတ် Clear အပိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး3ငါချက်ချင်းသွား။ ဤအကြောင်းကို Tyrone မေးတယ်. သူကရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင်ပြုံးပြီးပြောလိုက်တယ်, ဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ '. အဲဒီနောက်သူကကျွန်တော့်ကိုတုန်ခါနေတဲ့စွန်ပလွံသီးကိုသင်ပေးနေတယ်၊ ​​စွမ်းအင်ကိုအရာဝတ္ထုတွေကနေတစ်ဆင့်ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်စေမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်. ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားသွားပြီးနည်းနည်းဟောင်းကိုဖြိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်3ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောခြံမှာထိုင်နေသောအခန်း guest ည့်သည်အိမ်. ငါစီမံကိန်းဘယ်လောက်ဝေးဝေးကိုကြည့်ရှုရန်အိမ်ပေါ်အုပ်ကြွပ်များရိုက်နှက်စတင်ခဲ့သည်. တစ်ကြိမ်မှာကျွန်တော်အိမ်ရှေ့ကိုဝင်ပြီးနောက်ကျောမှာပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖဲ့ခဲ့တယ်. ငါအဲဒီမှာစွမ်းအင်ကိုငါရည်ရွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနိုင်မနိုင်စမ်းကြည့်ဖို့အိမ်ကိုစပြီးငါအဲဒီမှာကျွမ်းကျင်မှုတချို့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာစကြည့်ခဲ့တယ်။. Tyrone ကိုငါပြောတော့သူကမျက်မှောင်ကြုတ်တယ် (အနည်းငယ်စိတ်ဆိုး) ပြီးတော့, break မချိုးပါနှင့်, ဆက်လက်လေ့ကျင့်ပါ '. ငါတစ်ခါတစ်ရံမှာပြိုလဲနေတုန်းပဲ၊ အကယ်၍ ငါတို့အနုပညာကိုသုံးဖူးရင်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုကဆိုးဝါးတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရစေဖို့ငါတို့လက်ကိုလေ့ကျင့်ချင်တဲ့စိတ်ကူးရခဲ့တယ်. ဒီကနေ့မှာငါဟာစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ၊ ငါသရုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားကဘာကိုမျှော်လင့်ထားသလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုတဲ့အထူးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ကြားနေမှသာချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။. Tyrone လုပ်သလိုမျိုးရေရှည်ကျန်းမာရေးအတွက်ဒီဟာကပိုကောင်းတယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်. ကျွန်ုပ်တို့၏ Kung Fu ကိုတိုက်ပွဲတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Tyrone မှရှောင်ရှားနိုင်လျှင်လူများအားကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်အခါမှထိခိုက်နစ်နာအောင်မလုပ်သင့်ပါဟူသောအတွေးကိုလက်ခံခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်အလွန်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သောစက်မှုဇုန်မြို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ခဲ့သည်ကိုသူသတိထားမိခဲ့သည်။ ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုသုံးရမယ်. ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ‘Iron Palm Part 5’ သံထန်းအပိုင်း 4
ရာသီအပြောင်းအလဲကကျွန်ုပ်တို့အားရဲရင့်ရန်သတ္တိရှိဖို့တိုက်တွန်းသည်, ထွက်။ ရန်, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ရောက်ရန်. နေစဉ်ရဲရင့်အရေးယူမှုအချို့ကိစ္စများတွင်လေးစားနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်ရထားလမ်းလမ်းကြောင်းမှကြွလာသောအခါတစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားပုံပြင်ပါပဲ. လူတစ်ဒါဇင်နီးပါးအသက်အရွယ် 17 ထို့အပြင်နွေ ဦး ရာသီ၌ရထားလမ်းများ၌ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရခြင်း၊. ကံမကောင်းစွာပဲ, ဤအချိန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနှစ်စဉ်နီးပါးဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်. တန်ချိန် ၆၀၀၀ ရှိရထားတစ်နှစ်သည်မည်သည့်အချိန်ကိုမသိပါ. ဘဝကိုကယ်တင်နိုင်သောအရေးကြီးသောအကြံဥာဏ်အချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်: • ခေတ်သစ်ရထားတွေဟာအရင်ကထက်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ရှိတယ်, အဘယ်သူမျှမ telltale အတူ “clickety-clack ။” • ၎င်း၏အရွယ်အစားကြောင့်, ပျမ်းမျှမီးရထားသည်တစ်မိုင်သို့မဟုတ် ၁၈ ခုထက်ပိုသောဘောလုံးကွင်းများကိုရပ်တန့်ရန်သွားသည်. ရထားများကတစ်ဖက်စီ၏ရထားများကိုအနည်းဆုံးသုံးပေဖြင့်ကျော်ဖြတ်နိုင်သည်. ကုန်တင်ကားများနှင့်ချိတ်ဆွဲထားသောကြိုးကြိုးချည်များသည် ပို၍ ဝေးနိုင်သည်. • သင်ပုဒ်ဖြတ်ကူးရန်လိုအပ်ပါက, ဖြတ်ကူးရန်တစ်ခုတည်းသောလုံခြုံသောနေရာမှာသတ်မှတ်ထားသောအများပြည်သူသုံးကူးတံတားနှင့်အတူ၊, မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အနီရောင်အလင်းအိမ်သို့မဟုတ်တံခါးဝ. သင်အခြားမည်သည့်နေရာတွင်ဖြတ်ကူးလျှင်, မင်းဟာကျူးကျော် ၀ င်ရောက်လာပြီဆိုရင်၊. • သင်တစ် ဦး ကူးထံသို့လာ။ နှင့်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်အနီရောင်အလင်းအိမ်ကိုမြင်ရလျှင်, သူတို့ကိုလျစ်လျူရှုမထားဘူး. ရပ်: ဤမီးလုံးများသည်ရထား၏ချဉ်းကပ်မှုကိုပြသည်. ဤမီးလုံးများမှဖြတ်ကူးခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချထားသောတံခါးများပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြတ်ကူးသည့်အခါမည်သည့်အခါမျှမသွားပါနှင့်; မီးထွန်းညှိခြင်းရပ်တန့်သွားပြီးတံခါးများလုံးဝတက်သွားသည်အထိစောင့်ပါ. ဂိတ်များဆက်နေလျှင်, ဒုတိယရထားရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာမယ်. အချက်ပြမှုများသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည်အထိစောင့်ဆိုင်းပါ. • ဘယ်အချိန်မဆိုရထားအချိန်ဖြစ်ပါတယ်. ညဥ့်နက်ပိုင်းရောက်သောကြောင့်မယူဆပါနှင့်, ထိုနေ့၏အလယ်, စနေ, တနင်္ဂနွေ, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊, ရထားတွေလာဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး. ဤအကြံပြုချက်များသည်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကိုယခုရာသီ၌ပျော်မွေ့ရန်နှင့်လာမည့်အရာများစွာကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မည်. ရပ်ပါ & လမ်းကြောင်းမှဝေးလုံခြုံစွာနေရန်
Michael Bush : 2007 နေ့ပုံမူကြမ်း
Michael Bush သည် Louisville တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်, ဇွန်လတွင်ကီ 16, 1984. ဘုရ်ှသည်ထိုထက်ပိုသောအလေးချိန်ရှိသောပြန်လှည့်ပြေးနေသောခွန်အားတစ်ခုဖြစ်သည် 250 အလေးချိန်ပေါင်, နှင့်မှာရပ်တယ်6ခြေထောက်3လက်မအမြင့်. သူ၌ရှားပါးမြန်သောပေါင်းစပ်မှုရှိသည်, အရွယ်အစား, သူ၏အစောပိုင်းနှစ်များကတည်းကဘောလုံးကွင်းကိုအင်အားဖြစ်စေခဲ့သည်. သူ၏အထက်တန်းကျောင်းသက်တမ်းအတွင်းဘုရ်ှသည်ကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သည်. မိမိအလေးနှစ်တစ်လျှောက်လုံး quarterback အပါအဝင်ရာထူးကစားခဲ့ပါတယ်, ပြန်ပြေး, ခုခံကာကွယ်ပြန်, ခုခံကာကွယ်အဆုံး, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, မင်းဘူး, နှင့်ကျယ်ပြန့်လက်ခံ. အမျိုးသားအထက်တန်းကျောင်းတွင်အကြီးတန်းအနေဖြင့်ဘုရ်ှသည် quarterback ရာထူးကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးသူ၏အဖွဲ့အားပြည်နယ်ရာထူးသို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့သည်. အထူးသဖြင့်တစ်ခုမှာဂိမ်းဘုရှ်ရဲ့အထက်တန်းကျောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ထွက်ရပ်. အကြီးတန်းအနေဖြင့်သူသည် Louisville တက္ကသိုလ်၌သူ၏အနာဂတ်အသင်းဖော်အသင်းနှင့်ဆန့်ကျင်ခဲ့သည်, Brian Brohm. ဒီဂိမ်းစဉ်အတွင်းဘုရှ်အဘို့အပွေးလေ၏ 116 ကိုက်, အတွက်ပစ်ချ 468 ကိုက်, ခုနစျပါး touchdowns အဘို့မှတ်. များစွာသောလူတွေကထင်တဲ့ဂိမ်းထဲမှာ Kentucky ပြည်နယ်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, ဘုရ်ှရဲ့အဖွဲ့ထိပ်ပေါ်မှာထွက်လာ၏ 59-56. အထက်တန်းကျောင်းပြီးနောက်ဘုရ်ှသည် Louisville ရှိတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်. The 2005 ရာသီသည်ဘုရှ်အတွက်အပြေးပြိုင်ပွဲတစ်ရာသီဖြစ်ခဲ့သည် 1,143 ကိုက်နှင့်သွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် 23 မင်္ဂလာပါ. သူ့ 23 ရမှတ်များ NCAA တိုင်း ၁ ကိုအမှတ်ပေးရာတွင်လုံလောက်သည်. ကံမကောင်းစွာပဲ, ၏ပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းစဉ်အတွင်း 2006 ရာသီဘုရ်ှကသူ့လက်ျာ tibia ချိုးဖဲ့, နှင့်လယ်ပြင်သို့ပြန်သွားဘယ်တော့မှမ. ဒီဒဏ်ရာမတိုင်မီသူကသုံး touchdowns သွင်းယူနှင့်နေရာယူထားခဲ့သည် 128 မြေပြင်ပေါ်တွင်ကိုက်. ဘုရ်ှသည်သူ၏အခွက်တဆယ်ကိုရာသီတစ်ခုလုံးအတွက်သာပြသရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်း, သူသည်အစီအစဉ်တွင်အမှတ်အသားကျန်ခဲ့ပြီးအနာဂတ်အသင်းများနှင့်လည်းအလားတူလုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်နေသည်. ၏နိဂုံးပြီးနောက် 2006 ရာသီဘုရ်ှသည်မိမိအဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီကြေညာခဲ့သည် 2007 NFL မူကြမ်း. သူဟာဒဏ်ရာမရခင်မှာဘယ်နေရာကနေထွက်သွားမလဲဆိုတာရှာဖွေနေပါတယ်. Michael Bush : 2007 နေ့ပုံမူကြမ်း
ဂေါက်သီးကစားခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်သင်၏ဂေါက်သီးကစားနည်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်မှာသေချာသည်. သူတို့ရဲ့ဂိမ်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂေါက်သီးသမားအများစုအကြားမှာအကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်မှုတစ်ခုကတော့ကြွက်သားများနှင့်ဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုလေ့ကျင့်ပေးသောကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းကြောင့်ဂေါက်သီးနှင့်သက်ဆိုင်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။. ဒါကအပျော်တမ်းဂေါက်သီးသမားတော်တော်များများဟာဂေါက်သီးရိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အေးဆေးတဲ့ပရိုဂရမ်တွေမှာမပါ ၀ င်တာကိုအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်. They mistakenly link every weight-training program with muscle building and bodybuilding. Although it is true that muscle building and body building will tend to make somebody stiff, the facts are that weight training can either be used for body-building and building of muscles, or it can be used to build strength. The golf specific weight training programs are aimed at building strength and endurance. Not muscles. A genuine golf exercise program will have nothing in its’ weight training routine to remotely relate it to muscle or bodybuilding. In fact stronger conditioned muscles will tend to dramatically improve flexibility for golf, rather than reduce it. Flabby, weak, unexercised muscles are the ones that will tend to be very stiff and over time will take away the flexibility for golf in anybody. Stretch exercises, which work best with strengthened muscles are very effective in helping to increase flexibility. These exercises usually haveamajor impact on the quality of the golf swing for most players. Therefore it is not true that incorporating dumbbells into golf specific exercises makesagolfer lose flexibility. Rather the entire program playsamajor role in enhancing flexibility for golf and the results from players who have tremendously improved their game, speak for themselves. ဂေါက်သီးကစားခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းနှင့်အတူရှုံးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
အန်ဒရေအာဂတ်စ်လူစုလူဝေးကစားခြင်း! ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ, အကြောင်းမှာသူတို့သည်ပေါလ်ဂတ်စတိန်းနှင့်သူ၏ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကိုအဆုံးသတ်စေလိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါမှမဟုတ်, သူတို့ဟာ Agassi ကိုပွဲမှာပြန်ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်လို့သူတို့မျှော်လင့်တာဖြစ်နိုင်တယ်. ရာသီဥတုကသူ့အနားမှာမရှိတော့တဲ့နောက်မှာစိတ်ပျက်စရာတွေရှိလာတယ်, ဒါပေမယ့်နေဆဲ Agassi ပထမ ဦး ဆုံး set ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်, 6-4. သို့သော်, သူကအတူတူရနိုင်ခြင်းနှင့်သူသည်ဒုတိယ set ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အခါတရားရုံးဆန့်ကျင်သည်သူ၏ရက်ကက်ချိုးဖဲ့ 4-6. ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးချက်တွေရပြီးနောက်သူဟာပြtroubleနာရှာနေတာပဲလို့ထင်ပါတယ်. ဆုံးဖြတ်ခြင်းအစုံမကစားမီ, Agassi ပြင်ပတလျှောက်ထိုင်တော်မူ၏, သူသည်ချောနေသောတရားရုံးကိုကြည့်ပြီးပြန်မလာနိုင်ခြင်းကိုစဉ်းစားနေသည်. ကောင်းပြီ, သူပြန်လာခဲ့သူတစ် ဦး နှင့်အတူမှတဆင့်ဆွဲထုတ် 6-2. တတိယ set ကိုစတင်ပြီးနောက်နှစ်မိနစ်, Agassi သည် Goldstein ကိုမြေကြီးပေါ်နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းစဉ်အလုပ်လုပ်ရန်သွားခဲ့သည်, သူကျဆင်းခဲ့သည်, နှင့် Agassi ပိုပြီးစိတ်ပျက်ဖြစ်လာခဲ့သည်. သို့သော်, သူကဂိမ်းပြန်လာသောအခါပါပဲ, သူအမှားများကိုလျော့နည်းစေခဲ့သည်, ပိုကောင်းတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့်ပွဲထွက်ပိတ်ဖို့ရန်သူ၏အားသာချက်မှတစ်စက်ရိုက်ချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်. မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုသည်ကစားသမားနှစ် ဦး လုံးအတွက်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့် Agassi ကမျက်နှာပြင်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူများကိုဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်. သူဟာသိပ်ကိုထူးချွန်တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ၊ Agassihe နဲ့အရေးမကြီးဘူးလို့ထင်ရတဲ့ခက်ခဲမှုနဲ့အသက်အရွယ်အခြေအနေတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးကိုဖြတ်သန်းနေတုန်းပါပဲ။.
Jigs နှင့်အတူငါးမျှားခြင်းအများဆုံးငါးဖမ်းသမားများထိုသို့ပြုအတော်လေးမဖြောင့်သည်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်. ဒါကသူတို့တစ်တွေ jig ငါးမျှားပုံပါပဲ. အများစုကသူတို့လုပ်သင့်သည်ထက်ပိုမြန်သည်. Jigging သည်ကောင်းမွန်သော bass အရေအတွက်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာအရည်အသွေးမြင့်သောဘေ့စ်ထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်. အဆိုပါနွေ ဦး ငါးဖြီး၌တည်၏, ကိုယ့်တက်လာမယ့်ဖြစ်ကြောင်းနှင်းပန်း pads, လှေဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကျောက်ဆောင်. ရေတိမ်ပိုင်းငါးဖမ်းရန်ကြိုးစားပါ, အမြန်ဆုံးနွေး. တစ် ဦး နှင့်အတူငါး 1/2 အောင်စ jig ဝက်သားနှင့်အတူတင်ရန်. The Summer Now ၌ငါးဖမ်းသမားအများစုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာရွေ့လျားနေသောဆွဲဆောင်အားကိုတွေ့သောအခါဖြစ်သည်, သငျသညျ jigging ကြိုးစားသင့်ပါတယ်. ငါးချောင်းအိပ်ရာ, လိုင်းများ, မြက်နှင့်နှင်းပန်း pads. The Fall ခုနှစ်တွင်သစ်သားပတ်ပတ်လည်ငါးဖမ်း jigs ကြိုးစားပါ. မှတ်တမ်းများ, ငုတ်, လှေဆိပ်ကမ်းနှင့်သစ်ပင်များသည်ယခုနှစ်တွင်သင်၏ jig ကိုငါးဖမ်းရန်နေရာကောင်းများဖြစ်သည်. ဒါ့အပြင်အသေခံနေသောနှင်းတော pads စမ်းပါ. ဆောင်းရာသီတွင်မြစ်ချောင်းများသည်ဆောင်းတွင်းငါးဖမ်းခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်. ဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားနေသောရေကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားပါ3ရန်9ပေအကွာအဝေး. တစ် ဦး နဲ့တူတစ် ဦး ကလေးလံ jigs 3/8 ဝက်သားနှင့်အတူတင်ရန်အောင်စကောင်းသောအလုပ်လုပ်တယ်. နက်ရှိုင်းသောရေသည်နှေးသောရေတွင်ဘေ့စ်ကျောင်းများတွေ့ရှိနိုင်သည်. Jigging ကိုငါးမျှားလျှင်သင် bass ထုတ်လုပ်သည့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ငါး၏ရှေ့တွင် Jig ကိုထားပါ, အလွန်နှေးနှေးစွာရွှေ့ပါ။ သင်ဖမ်းမိသောငါးများရှိပါကရလဒ်ကောင်းများရရှိပါမည်. Jigs နှင့်အတူငါးဖမ်း
ကံမကောင်းစွာပဲငါတို့နေရာတိုင်းမှာငါတို့စက်ဘီးစီးလို့မရပါဘူး. တစ်ခါတလေငါတို့စက်ဘီးတစ်နေရာကနေတစ်နေရာကိုသယ်ဆောင်ရတယ်. ရှေးကာလ၌, လူများသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်စက်ဘီးစီးရန် hodge-podge နည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုကြသည်, သို့သော်ထိုနေ့ရက်ကာလကြာရှည်ဖြစ်ကြသည်! နောက်ကျောထိန်သိမ်း၏ထွန်းအတူ, သင်၏စက်ဘီးကိုဘေးကင်းစွာနှင့်လုံခြုံစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်ယခုဖြစ်နိုင်သည်. စက်ဘီးထိန်သိမ်းအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များနှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်လာ. သူတို့ကအစအမျိုးမျိုးသောစျေးနှုန်းများအတွက်လာ. သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်အနည်းငယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်. သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တာမြန်မြန် 300 ဒေါ်လာစျေးမြင့်မားတဲ့စက်ဘီးထိန်သိမ်းအပေါ်သို့မဟုတ်စျေးများသို့မဟုတ်ကားဂိုဒေါင်ရောင်းအားမှာတကယ်စျေးပေါတ ဦး တည်းကိုကောက်. သင်ရွေးချယ်သည့်တစ်ခုသည်သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်သည်. သင့်ကိုယ်သင်အောက်ပါမေးခွန်းများကိုမေးရန်သေချာစေပါ. 1. အဘယ်အရာကိုမော်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်? သငျသညျစက်ဘီးထိန်သိမ်းဘယ်မှာသွားလိမ့်မည်ကိုသိရန်လိုအပ်သည်. သင်၏ကားနှင့်မည်သို့မည်ပုံထိန်သိမ်းမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်. ထိန်သိမ်းကွဲပြားခြားနားသောပူးတွဲမှုနည်းလမ်းများအသုံးပြုသည်. သင်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကိုက်ညီသောအရာကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်. 2. သင်မည်မျှစက်ဘီးစီးရန်သင်လိုအပ်လိမ့်မည်? သင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောစက်ဘီးများကိုသယ်ဆောင်ပါသလား? သို့ဆိုလျှင်, သင်တစ် ဦး ထက်ပိုဆိုင်ကယ်ထိန်သိမ်းခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်ပူးတွဲဖိုင်တွေဝယ်ချင်ပါလိမ့်မယ်. 3. သူတို့ကိုဘယ်မှာဖမ်းခိုင်းတာလဲ? သင်အမိုးလိုချင်လားစဉ်းစားပါ, နောက်ဘက်, သို့မဟုတ်အားကစားထိန်သိမ်း: – ခေါင်မိုးထိန်သိမ်းဤရွေ့ကားထိန်သိမ်းယာဉ်၏ထိပ်မှာပူးတွဲထားသည် – နောက်ထည်ဤရွေ့ကားထိန်သိမ်းယာဉ်များ၏နောက်ဘက်ကပ် – အားကစားသုံးတွဲယာဉ်များဒီစက်ဘီးအမြောက်အများကိုသယ်ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည် 4. သင့်စက်ဘီးကဘယ်လိုပုံစံလဲ? သင့်စက်ဘီး၏အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္considerationာန်ကိုသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်. သင်ကလေးဆိုင်ကယ်သယ်ယူနေတယ်ဆိုရင်, ဥပမာ, သငျသညျစက်ဘီး၏အရွယ်အစားယူလိမ့်မည်ဟုထိန်သိမ်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. 5. အဘယ်သူသည်စင်ပေါ်မှာစက်ဘီးကိုတင်လိမ့်မယ်? ဒါဟာ loader များအတွက်အဆင်ပြေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်. အဆိုပါထိန်သိမ်းပိုမိုလွယ်ကူပိုမိုစျေးကြီးထိန်သိမ်းဖို့ load လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. 6. သင့်ထိန်သိမ်းမှုဘယ်လောက်ခိုင်မာသင့်သလဲ? သင်မိုးသည်းထန်စွာစက်ဘီးကိုတင်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ဆိုင်ကယ်၏အလေးချိန်ကိုခံနိုင်သည့်ထိန်သိမ်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. သူတို့ကကြံ့ခိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်လုပ်ရမည်. ဒါပေမယ့်ဒီပစ္စည်းကပိုတောင့်တင်းခိုင်မာတယ်, အဆိုပါ prackier အဆိုပါထိန်သိမ်း. 7. ဒါကြောင့်သော့ခတ်ဖြစ်သင့်သည်? အကယ်၍ သင်၏စက်ဘီးအတွက်လုံခြုံရေးထပ်မံထည့်သွင်းလိုပါကသော့ခတ်ခြင်းနှင့်အခြားလုံခြုံရေးကိရိယာများကိုထောက်ပံ့သောထိန်သိမ်းများကိုသင်ဝယ်ယူလိမ့်မည်. 8. သငျသညျထိန်သိမ်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မကြာခဏ? ခရီးသွားခြင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့် ၀ ယ်ယူရန်အတွက်သင်ထိန်သိမ်းမည်ကိုမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်. သင်မကြာခဏအသုံးပြုလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုအတွက်သင်ဝယ်စရာမလိုပါ, မြင့်မားသောစျေးနှုန်းထိန်သိမ်း. 9. သင်ဘယ်လောက်သုံးချင်လဲ? နောက်ဆုံးတွင်, အရာအားလုံးသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်မှဆင်းအနာဆိုး. သင်ကမတတ်နိုင်လျှင်, သင်အဲဒါကိုလိုအပ်ရင်တောင်, စောင့်ရမယ်. သို့သော်စျေးသက်သာသောအခြားနည်းလမ်းများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကသိုလှောင်ရန်မကြောက်ပါနှင့်. သင်လိုအပ်သောအင်္ဂါရပ်များသာရှိသောထိန်သိမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ. ကခေါင်းလောင်းများနှင့်လေချွန်ရှိပါကသင်မလိုအပ်ပါဘူး, ချက်ချင်းမဝယ်ကြဘူး. သင်အနာဂတ်၌သင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ကောင်းပါသည်, ဥပမာ. စုစုပေါင်းဆိုင်ကယ်ထိန်ဝယ်ခြင်းလမ်းညွှန်
တစ် ဦး ပခုံးဒဏ်ရာဘောလုံးဂိမ်းကနေသူ့ကိုစောင့်ရှောက်သောပြီးခဲ့သည့်ရာသီရဲ့တတိယဂိမ်းကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရပြီးနောက် Bellamy ပြန်လယ်မှရတဲ့လိမ့်မယ်. အဲဒီကတည်းကသူ့ကိုမှဖြစ်ပျက်မခံခဲ့ရပါဘူး 1995. Bellamy ရှိပါတယ် 13 သူဟာ New Orleans Saints ကာကွယ်ရေးကိုပြန်လာဖို့အတွက်သူပြန်လာဖို့စောင့်နေတာပါ. သူ၌သူတော်စင်ပူးပေါင်းကတည်းက 2001, Bellamy ရှိပါတယ် 451 စုစုပေါင်းယူ (334 တစ်ကိုယ်တော်), ကိုးကြားဖြတ်, 4.5 အိတ်, ခြောက်လအတင်းအဓမ္မ fumbles နှင့်ငါး fumble ပြန်လည်နာလန်ထူ. သူ၏ဝါရင့်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုကို New Orleans တွင်လွဲချော်ခဲ့သည်’ နောက်ဆုံးကျော်အလယ်တန်း 13 ယခုနှစ်ဂိမ်းများ. သူကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့သည် 67 ကြိုတင်သည်သူ၏ဒဏ်ရာတစ်ခုစိန့်အဖြစ်ဂိမ်းများ — 122 ခြုံငုံ (အားလုံး NFL ခုခံကာကွယ်ကျောအကြားအရှည်ဆုံး Streak) သူသည်စက်တင်ဘာလတွင်မင်နီဆိုတာ၌ပထမဆုံးခုခံကာကွယ်သည့်စီးရီးပေါ်သို့မဆင်းမီ rotator cuff ဒဏ်ရာနှင့်အတူ. ဒါပေမယ့်, သူသည်မိမိအသင်းဖော်များအားထောက်ပံ့ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိနေစဉ်ရာသီကုန်တွင်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်. သူသည်သူပြုသကဲ့သို့ Bellamy သည်နောက်ထပ်ကြီးစွာသောတစ်နှစ်ရှိလိမ့်မည်ဟုထင်ရသည် 2004, သူပြီးမြောက်သောအခါအချိန် 116 စုစုပေါင်းယူ,2အတင်းအဓမ္မ fumbles နှင့်သုံး fumble ပြန်လည်နာလန်ထူပေမယ့် 11 ယူ (ရှစ်တစ်ကိုယ်တော်) အတွက်ပထမသုံးဂိမ်းထဲမှာ 2005 သူကသူ့ပခုံးဒဏ်ရာမကြုံတွေ့မှီသူအဲဒီရာသီလုပ်နိုင်အားလုံးဖြစ်ခဲ့သည်. Bellamy ကို Seattle Seahawks မှမူလကအခမဲ့လက်မှတ်ထိုးသူအဖြစ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် 1994. ထိုနှစ်နို ၀ င်ဘာလတွင်သူသည် Seattle Seahawks ၏အရံသို့ဒဏ်ရာရခဲ့သည်. In 2001 သူသည် Saints မှလေးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည် (UFA) နှင့် 2005 သူသည် Saints ကသုံးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်ပြန်လည်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် (UFA). In 2005 သူကသူတော်စင်များက Reserve / ဒဏ်ရာအပေါ်ထားရှိခဲ့သည်. Bellamy သည်ဘောလုံးကွင်းသို့ပြန်သွားသည်
Paintball သည်မည်သူမဆိုအတွက် Bang-Up အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်
Ron Fowler ကစိုစွတ်သောလက်သုတ်ပုဝါနှင့်ရိုက်နှက်ခံရသည်ဟုခံစားရကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်. Bryan Vasaris ကရော်ဘာကြိုးဖြင့်ရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျားဖြင့်ထိုးခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်. တစ် ဦး paintball သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခံရအလွန်ပျော်စရာအသံမထားဘူး. ဒါကြောင့်ဘာကြောင့် Paintball ဟာအမေရိကမှာအလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေတဲ့အားကစားတစ်ခုဖြစ်ရတာလဲ, အမျိုးသားအားကစားကုန်ပစ္စည်းအသင်းအရသိရသည်? “ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုကယ်ဆယ်ရေးပါပဲ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကအပြင်ကိုထွက်ပြီးလူတွေကိုသေနတ်နဲ့ပစ်နိုင်တယ်၊,” ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်. “But it’s also being withagroup of guys that you like to hang around with.” The most commonly played paintball game is “capture the flag.” There are rules variations, but the object is forateam to capture the opposing team’s flag while protecting its own. Players eliminate opponents by shooting them with their paintball guns. The games can be played outside in an open field or forest, or inside ataspecially designed facility with inflatable bunkers and other obstacles. “It’s not the hide-and-seek game everyone thinks,” ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်. “It’s really action-packed and fast-paced.” Players use carbon dioxide- or nitrogen-powered guns that fire thin, gelatin capsules filled with non-toxic paint – က “paintballs.” Vasaris, 22, who has been playing paintball since he was in high school, will beasenior at the University of Cincinnati this year and is the president of the school’s paintball team. He said getting shot isn’t as bad as it seems. “After the first time, I didn’t even think about getting hit,” ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်. “There is such an adrenaline rush that you don’t even feel it.” For those who want to experience that rush, there are plenty of paintball facilities around Cincinnati. A good place to start for beginners is the Hueston Woods Paintball Club at Hueston Woods State Park. Tom Arvan, who has been the paintball club’s general manager for 12 နှစ်ပေါင်း, likes to promote the game to new players. “My personal enjoyment is seeing the kids play and seeing first-time players come off the field withagrin on their face,” Arvan said. Hueston Woods is open every Saturday and Sunday from 10 a.m.-6 p.m. and offers two fields, including one that is wooded with some constructed obstacles. The cost to play is $27, which includesagun,acarbon dioxide tank, 200 paintballs and protective gear. Players who have their own equipment pay $12. The fields are open Monday through Friday by reservation for groups of 15 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်. Arvan said Hueston Woods has catered to birthday parties, bachelor parties, fraternity and sorority parties and corporate outings. “We have had high praises from corporate groups for team-building,” Arvan said. “It’sagame that really fosters some friendship and sportsmanship.” Arvan said his paintball field is open to players of all skill levels. “Paintball isasport that isn’t dominated by youth and physical size,” Arvan said. “We’ve had mom, dad, grandma and grandpa out here.” For more information on the sport of paintball please go to www.alphasportsinc.com Paintball Is A Bang-Up Sport For Anyone
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးသင်၏ Swing Transform ကိုကြည့်ပါ
သင့်ရဲ့လွှဲတိုးမြှင့်ဖို့သင့်ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်အောင်. ၎င်းသည် oxymoron ကဲ့သို့အသံထွက်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ငါကျော်စကားပြောနိုင်ပါတယ် 10,000 ဒါပွုပါပွီသူကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဂေါက်သီး. ငါ၏အအွန်လိုင်းဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်အဖွဲ့ဝင် site ကိုမှတဆင့်, DVD များနှင့်စာအုပ်များ, ငါနောက်ကျောကျော်ထံမှကြားဖူးတယ် 10,000 အတိတ်ကဂေါက်သီးသမား6သူတို့ရဲ့လွှဲနှင့်ဂိမ်းအတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုမြင်ကြပြီသူနှစ်ပေါင်း. ငါ၏ theory သီအိုရီကိုမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ, သင်၏လွှဲတိုးတက်စေရန်’ ကျော် 10 လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှ now'and ဂေါက်သီးနောက်ဆုံးတော့ယုံကြည်နေကြသည်! ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ထားစဉ်ရုပ်မြင်သံကြားကိုဖွင့်ပါ၊ သင်၌ဂေါက်သီးကြံ့ခိုင်မှုဖော်ပြသည့်ဝေဖန်သုံးသပ်သူကိုသင်ကြားရပါလိမ့်မည်5မိနစ်များ. ကောင်းကျိုးအားလုံးသည်လုပ်နေကြသည်, ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်သင်အလိုမရှိ? သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကသင်၏ဂေါက်သီးစွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည်! ကာလ! ငါ့ကိုမှားကြောင်းသက်သေပြရန်ကြိုးစားပါ. ဒါကရဲရင့်တဲ့ကြေညာချက်တစ်ခုလိုထင်ရလိမ့်မယ်, သို့သော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကန့်အသတ်ရှိသောကိုယ်ထည်သည်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးလွှဲစက်များတွင်အခွင့်အရေးမရှိပါ 18 တွင်း. သငျသညျအပြည့်အဝ backswing လုပ်မပေးနိုင်သူတစ် ဦး အကြီးတန်းဂေါက်သီးနှင့်အတူအကြိမ်ပေါင်းမည်သောခဲ့ကြပြီ; သို့မဟုတ်သူ၏ဂေါက်သီးလွှဲ၌နေပါ? ဒါဟာပြံ့နှံ့ပြproblemနာပါပဲ! ဂေါက်သီးအသက်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ, လျှင်မြန်စွာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျဆင်းမှု. ဒီကျဆင်းမှုကြောင့်အစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ကလပ်အားလုံးနှင့်အတူအကွာအဝေးများစွာဆုံးရှုံးသွားသည်; ပိုပိုပြီးကိုက်ညီမှုမရှိတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုနဲ့သင်ကစားလေလေ. ငါမင်းကိုအာမခံနိုင်ပါတယ် 100% သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်တိုးတက်လျှင်, သင်၏ swing ကိုယ်တိုင်ကဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်. တီးဝိုင်းအကူအညီလွှဲလွှဲခြင်းများမရှိတော့ပါ. နောက်တဖန် gimmicky လေ့ကျင့်ရေးအထောက်အကူများ. သင်၏အပြောင်းအလဲကိုသိမြင်ရန်သင်ခန်းစာများစွာမလိုအပ်ပါ. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြင့်သင်၏စွမ်းအားနှင့်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အထင်ရှားဆုံးတိုးတက်မှုဖြစ်လိမ့်မည်. ငါချွေးထွက်အားကစားရုံထဲမှာတစ်ရက်နာရီအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး! ငါပြောနေတာပါ 30-40 မိနစ်များ 2-3 သင့်အိမ်၌တစ်ပတ်လျှင်ကြိမ်ရှိသည်, အနည်းငယ်မျှသာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ. ဒါပဲ! ဘာမှပို, ဘာမှမရှိဘူး! ဒါကြောင့်တှနျ့ဆုတျပါဘူး! သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးသင်၏လွှဲသည်ကြောက်စရာကောင်းလိမ့်မည်! သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးသင်၏ Swing Transform ကိုကြည့်ပါ